Ubuntu bamathebulethi | Kusuka kuLinux
I-Canonical ithatha isinyathelo esisha ngeplatifomu yayo yamadivayisi amaningi ngokuya ngohlelo lwayo lwe-Ubuntu ngesethulo esisemthethweni se- Ubuntu bamathebulethi. Ngale ndlela ifuna hlanganisa izindawo zokuhlangana kuwo wonke amadivayisi eselula nedeskithophu.
ICanonical ilindele iMobile World Congress (MWC), ezobanjelwa eBarcelona phakathi kukaFebhuwari 25 no-28, futhi yethula Ubuntu ngamaphilisi.
Ngale ndlela, inkampani iqeda isu layo lezikrini ezine, okungukuthi, ukuba nezingxenyekazi zama-PC wedeskithophu, ama-TV, ama-smartphone futhi, ekugcineni, amaphilisi.
I-interface yesistimu yokusebenza yenkampani entsha yamathebulethi icishe ifane naleyo yesikhulumi kuwo wonke amanye amadivayisi, ngoba ingabanjelwa ukuhambisana nezikrini ezahlukahlukene. Ngalo mqondo, ingasekela izikrini eziphakathi kwamayintshi ayisithupha kuya kwayi-6, ngezixazululo eziphakathi kwamaphikseli aphakathi kuka-20 no-100 nge-intshi ngayinye.
Ubuntu ivumela abasebenzisi ukuthi bakhe ama-akhawunti ahlukene ngaphakathi kwikhompyutha eyodwa ukusebenzisa izinhlelo eziningi ngasikhathi sinye futhi kufaka nokulawulwa kwezwi. Isikrini sasekhaya seplatifomu singalungiswa ngokuya ngokunambitheka kwabasebenzisi noma opharetha bezingcingo. Izinhlelo, amamenyu nezilungiselelo kungafinyelelwa kusuka ezinhlangothini zesikrini.
Ipulatifomu izosebenzisa ikhodi efanayo ezinhlotsheni zayo ezine, kungaba ngama-Smartphones, amaphilisi, ama-PC PC kanye nama-TV, ngakho-ke ukusebenzisa, isibonelo, uhlelo lokusebenza lwe-smartphone lungasetshenziswa kuthebhulethi ngaphandle kokuthi luguqulwe noma kushintshwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Ubuntu bamathebulethi
Ngithande kakhulu isethulo, ngabe singafakwa kwi-kindle fire HD?
lapho-ke singalanda futhi siyifake kunoma iyiphi idivayisi ??? ake sithi kuthebhulethi yakwa-samsung noma i-lg noma i-nokia smartphone ??????
Umbuzo wamarandi ayisigidi ukuthi singakwazi yini ukufinyelela kumakhosombe nokufaka izinhlelo ongakwazi ku-Android. Uma besinika i-Android ebubende, anginantshisekelo. Engikufunayo yiLinux yangempela ku-Nexus 7. Ngoba kungubuhlungu bangempela ukuthi ngeprosesa enjalo into engijabulisayo engingayenza ukufunda amahlaya ngombala
Micky miseck kusho
Ngingathanda ukuthi uyithumele ku-HP Touchpad, noma ngabe kunamachweba angekho emthethweni we-Android, i-Arch Linux, i-Mer ne-Ubuntu yale thebhulethi enhle
Phendula uMicky Miseck
Ngicabanga ukuthi ngabe ingafakwa kwi-PC encane, ilandwa futhi ifakwe kanjani? Ngingathanda ukukuzama
Alonso Herrera kusho
Ekuqaleni, lapho beqala ukukhuluma ngalesi sihloko, bengicabanga ukuthi amaphilisi ane-Ubuntu efakwe kuwo azothengiswa, kepha manje ngiyaqonda ukuthi ukulanda kwamahhala kwale OS nokukwazi ukuyifaka kuzovunyelwa, ngabe kunjalo noma nginephutha? ?
Phendula u-Alonso Herrera
Okwamanje kunjena, kepha lokho akusho ukuthi ngokuzayo enye inkampani eyenza amaphilisi inquma ukufaka Ubuntu futhi ithengise amaphilisi ngalolo hlelo.
Ungayifaka kanjani Ubuntu Touch